Dowladda Somalia oo ku dhawaaqday Abaalmarin lagu maamuusayo Marxuumad Hodon Naaleeye. | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xukuumadda Somalia ayaa shaacisay Abaalmarin loo sameeyay in sanad kasta lagu maamuuso saxafiyadii Hodon Naaleeye ee dhowaan lagu dilay weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo.
Qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Somalia ayaa lagu sheegay in is loo xurmeeyo hal-abuurnimimadii Hodon Naaleeye ay wasaaradaasi bixin doonto abaal marin loo bixiyey ‘ABAAL MARINTA HODONNALEYEH’ oo sanad kasta ay ku tartami doonaan dadka qurbejoogta Soomaalida ah ee wax fiican u qabtay dadkooda.
“Iyada oo la xurmaynayo nolosha halabuurnimo ee Hodan Naaleeye, Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga waxa ay bixin doontaa inshaallah (Abaalmarinta #HodanNalayeh). Sanad waliba waxa aanu guddoonsiin doonnaa qof aan u aqoonsannay in uu wax muuqda qabtay oo ka tirsan Qurbajoogga Soomaaliyeed. Nala soco si xog dheeraad ah u heshid..” ayaa lagu yiri qoraalka Wasaaradda Arrimaha dibadda Somalia.
Allaha u naxariistee Hodon Naleye ayaa ifka uga tagtay laba wiil oo ay dhashay, waxaana la geeriyooday saygeedii, iyadoo la sheegay inay uur lahayd. Wasiirka Arrimaha dibadda Somalia Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inuusan fursad u helin la kulanka Hodon Naleye si uu ugu bogaadiyo howsha muhiimka ah ee ay dadka iyo qaranka Soomaaliyeed u heysaay.
Previous articleWakiilka Q/Midoobay oo Axmed Madoobe gaarsiiyey Dalabka Beesha Caalamka ee Doorashada Jubaland [Akhriso]
Next articleDonald Trump: “Ilhan Omar waxay ka timid Somalia oo ah Dowlad fashilantay & Dal fashilmay, kadibna..” [DAAWO]